ရွှေဥဒေါင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော. ရွှေဥဒေါင်းတောရိုင
ⓘ ရွှေဥဒေါင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော. ရွှေဥဒေါင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်န ..
ⓘ ရွှေဥဒေါင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော
ရွှေဥဒေါင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးမိတ်မြို့နယ်တို့နှင့် ဆက်စပ်တည်ရှိသည်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော တည်ထောင်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံပေးနိုင်စေရန်၊ ဆင်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကို ခိုးယူသတ်ဖြတ်ခြင်းကာကွယ်ရန်၊ တောင်ယာစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
မြောက်လတ္တီတွဒ်၂၃°၀၁၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆°၁၃၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးမိတ်မြို့နယ်တို့နှင့် ဆက်စပ် တည်ရှိပြီး ၃၂၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်မှာ ၁၉၂၇ခုနှစ်မူကွဲ ၁၉၁၈ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။
သစ်တောအမျိုးအစားမှာ အမြဲစိမ်းတော အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ရွက်ကြွေတောများလည်း ရှိသည်။ ဆင်၊ ပြောင် Gaur၊ ဆတ်၊ စိုင်Banteng၊ ဝက်ဝံ၊ ဆီးရိုးတောဆိတ်Serow Deer များ ကျကစား နေထိုင်ကြသည်။
MYANMAR: COMBATING ILLEGAL WILDLIFE TRAFFICKING AND ILLEGAL LOGGING DEC 2013 - JAN 2014 Archived3February 2015 at the Wayback Machine.
Wikipedia: ရွှေဥဒေါင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော